Wednesday June 02, 2021 - 10:29:25 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in dhowaan ay soo laabi doonto calanka dagaalka ee wadanka Afghanistan kadib 20 sano oo duullaan ah.
Wararka ka imaanaya Wadanka Afganistan ayaa sheegaya in dawladda Mareykanka ay qorshaynayso in ay faarujiso saldhigga ugu weyn ee ciidamadeedu ay uga suganyihiin wadankaas waana saldhigga ee Bagram.
Mareykanku wuxuu sheegay in 20-ka bishan uu saldhiggan ku wareejin doono ciidamada xukuumadda camiilka Afghanistan.
Mas'uul hadlay warbaahinta oo diiday in la shaaciyo ayaa sheegay in hawlgalka dib ucelinta saldhgga la go'aansaday in lagu qaato muddo 20 maalin ah balse uu sheegay in ay suura gal tahay in mudadu ay intaasi ka badato ama ay ka yaraato , isagoo intaasi ku daray in wasaaradda difaaca ee sameysay koox gaar ah oo loo xilsaaray ilaalinta iyo kormeerka dib ucelinta xeradaasi la doonayo in lagu wareejiyo ciidanka dawladda dabadhilifka ee ka jirta Magaalada kaabul.
Mar sii horeysay ayuu wasiirka difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin golaha xildhibaanada mareykanka ka hor sheegay in ka bixitaanka ciidamada American-ka uu ku socanayo xawaare sugan kana hor mari doono waqtigii la isla xadiday.
Sidoo kale waxaa la sheegay in halkaasi laga soo daabuli doono keydadka iyo zaadkii ciidanka ee yaalay saldhigga Bagram iyo dhamaan gaadiidka hubka, saldhiggan ay ciidamada American-ka ah faarujinayaan ayaa qiyaastii 50Km ujira magaalada caasimadda ah ee Kaabuul waxaana kuyaal xabsi fadeexad ku caanbaxay kaasi oo lagu tacdiibin jiray maxaabiista muslimiinta.
Heshiis magaalada Dooxa ku dhaxmaray sanaddii 2020-ka dowladda Mareykanka iyo Imaarada islaamiga ah ayaa dhigayay in dhammaan ciidamada shisheeye ay ciidda Afghanistan isaga baxaan taas bedelkeena ay jihaadiyiintu xabadda joojiyaan muddo xadidan.
Mareykanka oo duqeymo ku beegsaday garabyada Iiraan ee Ciraaq iyo Suuriya.
Dagaalyahannada Taliban oo lawareegay magaalooyin katirsan Afghanistan.
Mareykanka la wareegay Website-yo ay laheyd warbaahinta Iiraan.